Maka: ukucutshungulwa kwekhadi lesikweletu | Martech Zone
Maka: ukucutshungulwa kwekhadi lesikweletu
Ukucubungula Amakhadi Esikweletu kanye Nokuhlolwa Kwamaselula Kuchaziwe
ULwesibili, May 20, 2014 NgoMsombuluko, Juni 29, 2015 Douglas Karr
Izinkokhelo zeselula seziyinsakavukela futhi isu eliqinile lokuvala ibhizinisi ngokushesha nokwenza izinqubo zokukhokha zibe lula kwikhasimende. Noma ngabe ungumhlinzeki we-ecommerce onenqola egcwele yokuthenga, umthengisi onokuphuma okuhambayo (isibonelo sethu lapha), noma ngisho nomhlinzeki wesevisi (sisebenzisa iFreshBooks ukwenza i-invoice ngezinkokhelo ezinikwe amandla), izinkokhelo zeselula kuyisu elihle lokuvala igebe phakathi kwesinqumo sokuthenga nokuguqulwa kwangempela. Lapho siqala ukubhalisa,
I-Flint: Ukucubungula Inkokhelo Yeselula Kusetshenziswa Ikhamera
NgoLwesibili, Januwari 1, 2013 Douglas Karr
Kwesinye isikhathi yizinto ezincane ezenza umqondo omkhulu. Ngenkathi wonke umuntu egijimela ukwenza abafundi bekhadi nama-dongle amadivayisi eselula… abantu baseFlint bazibuza ukuthi kungani singasebenzisi nje ikhamera. Uhlelo lukhomba futhi ludlulise inombolo yekhadi ngokusebenzisa ikhamera kepha empeleni alugcini isithombe sendawo sezinombolo. Izici ze-Flint: Akukho Reader weKhadi - Vele usebenzise uhlelo lokusebenza lwe-Flint ukuskena ngokuphepha ikhadi esikhundleni sokuswayipha
Ngokushesha unikeza izinkampani ipulatifomu yokukhangisa ekhokhelwayo. Ngamafuphi, ukumaketha kokukhokha kungubuciko bokubheka izitayela kusuka kudatha efihliwe phakathi kokuthengiselana kwenkampani. Ngokwethembeka kwamakhasimende ngesikhathi esiphansi, kwenza kube lula ukuthola izindlela ezifihliwe zokuxhumana nabo usebenzisa idatha yabo yokukhokha. Amabhizinisi ashintshela kupulatifomu kaSwipely angaqhubeka nokucubungula izinkokhelo njengokujwayelekile, kuyilapho injini kaSwipely imayini idatha eza kanye nokuthengiselana okunjalo